Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Ra’iisul wasaaraha oo maanta daah-furay shirka Banbaxa Golaha Wasiirrada – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Ra’iisul wasaaraha oo maanta daah-furay shirka Banbaxa Golaha Wasiirrada
November 3, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta si wada-jir ah u daah-furay shirka Banbaxa Golaha Wasiirrada.
Shirkan oo socon doono 3-5-ta bisha, ayaa looga hadli doonaa dar-dar gelinta qorsheyaasha Xukuumadda hortabinta u leh, gaar ahaan doorashooyinka, amniga, kordhinta dhaqaalaha, daynta cafinta, horumarinta bulshada, caddaaladda iyo qorshaha waxqabadka Xukuumadda ee 100ka maalmood.
Guddoomiye Mursal, ayaa khudbadiisa kaga hadlay ahmiyada xiriirka iyo wadda-shaqeynta Baarlamaanka iyo Xukuumadda.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa sheegay in Xukuumaddiisu ay ku shaqeyn doonto qorshaha horumarinta Qaranka ee 9-aad iyo natiijadii ka soo baxday shirarkii madaxda Qaranku ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa Golaha kula dar-daarmay in ay hir-geliyaan, qodobada saldhigga u ah barnaamijka Xukuumadda ee Golaha Shacabku ay ansixiyeen.
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo akhrinta 2-aad marsiiyay hindise-sharciyeedka Hay’adda Socdaalka
Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka oo kulan yeeshay